अस्वस्थ शक्तिशाली प्रधानमन्त्री
समाचार विश्लेषण । गिरिजाप्रसाद कोइराला २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि निकै शक्तिशाली भए । तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई समेत पेलेर जानसक्ने क्षमता बनाए । राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा देवीदेवताको
सरकारका प्रवक्ता बास्कोटाले ढाँटे
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिंगापुर उपचारका लागि जानुअघि मन्त्रिपरिषद्को बैठक भिडियो कन्फेरेन्सबाट गर्ने निर्णय गराए । उनले सिंगापुरबाट भिडियो कन्फेरेन्सबाट मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखे । बैठकको तस्वीर सार्वजनिक भयो
प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य सामान्य, प्लाज्मा फेरेसिस उपचार अर्को सातासम्म
काठमाडौं, ११ भदौ । सिंगापुरको नेश्नल युनिभर्सिटीमा उपचारर्थ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको उनका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले स्पष्ट पारेका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीको प्लाज़्मा फेरेसिस
प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्योपचार सुरु
काठमाडौं, ७ भदौ । उपचारको लागि सिंगापुरमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपचार प्रक्रिया सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्यालले दिएको जानकारीअनुसार प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य परीक्षण
सिंगापुरमा हुने उपचारले राम्रो नतिजा आउने डा. काफ्लेको विश्वास (भिडियोसहित)
काठमाडौं, ५ भदौ । बरिष्ठ मृगौलारोग विशेषज्ञ डा. ऋषिकुमार काफ्लेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको क्रिटेनाईन बढेकोले सिंगापुरमा हुने उपचारले राम्रो नतिजा आउने विश्वास दिलाए । एन्टिबडीको मात्रा घटाउन सकियो भने
हाम्रै सिफारिशमा प्रधानमन्त्री सिंगापुर जानुभएको हो, एन्टीबडीको मात्रा बढि देखिएको छ : डा. शर्मा (भिडियोसहित)
काठमाडौं, ५ भदौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजि चिकित्सक डा. दिलिप शर्माले मिर्गौला सम्बन्धी एन्टीबडीको मात्रा केही बढी देखिएकाले थप उपचारका लागि सिंगापुर जानुपरेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले
‘ओलीले प्रचण्डलाई लम्पसार पारिदिए’ : दिक्षित (भिडियोसहित)
काठमाडौं, ४ भदौ । नागरिक समाजका अगुवा डा. सुन्दरमणि दिक्षितले मुलुकको राजनीति खासगरी नेकपा नेताहरुको सम्बन्ध हेर्दा पूर्ण रुपमा विमतितर्फ अघि बढिरहेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले नेकपा अध्यक्षयद्धय केपी
– नारायण ढुङ्गाना : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसपटकको संविधान तथा राष्ट्रिय दिवस भव्यता र व्यापकताका साथ मनाउन सबैमा आह्वान गरेका छन्। ठूलो बलिदान र सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिका रूपमा संविधान आएकाले
प्रधानमन्त्री ओली स्वास्थ्य परीक्षण गराउन बिहीबार सिङ्गापुर जाने
काठमाडौं, ३ भदौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिहीबार स्वास्थ्य परीक्षणका लागि पुनः सिङ्गापुर जाने भएका छन् । मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको प्रमुख चार राजनीतिक दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले
वरियाता खोसिएपछि माधवको असन्तुष्टी : ओलीको एक पद खोस्ने रणनीति
काठमाण्डौ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्षमध्ये एकपद छोड्न लिखित प्रस्ताव गरेपछि सत्तासीन नेकपाभित्र नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ । नेकपा
नेकपा सचिवालय बैठक स्थगित्, कारण यस्तो छ
काठमाडौं, ३ भदौ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आज बस्ने भनिएको सचिवालय बैठक स्थगित भएको छ। नेकपानिकट उच्च स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार गृहकार्य नपुगेको भन्दै आज तीन बजे
नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठक राम्रो र सकारात्मक हुन्छ : डा. भट्टराई (भिडियोसहित)
‘प्रधानमन्त्री ओली फलो–अपको लागि सिंगापुर जान लाग्नुभएको हो’ काठमाडौं, ३ भदौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले भोलिबाट सुरु हुने नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा द्धिपक्षीय